XIKOO dia manana ny vokatra mangatsiaka rivotra rehetra natokana ho azy ary novolavolaina miaraka amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina. Afaka manome serivisy fanodinana OEM arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa avy amin'ny firenena sy faritra samihafa, OEM toy ny: lokon'ny fisehoan'ny vokatra, ny asan'ny ampahany vokatra, ny herinaratra, ny matetika, ny plug, ny fonosana vokatra ary ny zavatra takian'ny mpanjifa hafa, ny ekipanay dia hanome anao serivisy OEM amin-kitsimpo .
XIKOO dia afaka miara-miasa amin'ny marika lehibe ho an'ny famolavolana bobongolo, ny fampandrosoana, ny fanodinana ny tsindrona bobongolo, ny famokarana sy ny kojakoja fanamafisana ny rivotra mangatsiaka, ny fizarana bobongolo, ny fizarana kojakoja ary ny fizarana mahazatra hanomezana tolotra ODM ho an'ny mpanjifa manerantany.
Fahaiza-manao fampandrosoana bobongolo
Ny orinasanay dia afaka manome sary 3D sy sary firafitry ny bobongolo ao anatin'ny 7 andro miorina amin'ny santionany na sary famolavolana avy amin'ny mpanjifa, mamita ny famokarana bobongolo ary manandrana ny bobongolo ao anatin'ny 45 andro, ary manatitra ny bobongolo ho an'ny tsindrona ao anatin'ny 50 andro.
Fahafahana fanodinana tsindrona
2 setan'ny milina fanenomana tsindrona 2 200 taonina sy milina fanoratana tsindrona 1 800 taonina, manome serivisy vita izahay avy amin'ny fampandrosoana ny vokatra, ny famolavolana, ny fanokafana ny bobongolo, ny famolahana ny tsindrona ary ny fivoriana.
XIKOO dia nanamboatra ny tsipika famokarana sy ny atrik'asa fivorian'ny milina feno, mpiasa maherin'ny 50 mpiangona mahay, ary milina feno sy SKD feno 50 000 isan-taona.
XIKOO dia manana milina fanandramana marobe, fizahana kalitaon'ny sosona, nahazo patanty nasionaly 12, ary nandalo 3C nasionaly, fanamarinana EU CE, ary mari-pahaizana SASO Moyen Orient, ary azo antoka ny kalitaon'ny vokatra.
Angony ny famokarana
Fanaraha-maso ny fanekena
OEM / ODM dia niara-niasa tamin'ny mpanjifa